विदेशी अवार्डमा राष्ट्र बैङ्कको कडाइ | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय विदेशी अवार्डमा राष्ट्र बैङ्कको कडाइ
on: December 28, 2017 सम्पादकीय
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरराष्ट्रिय अवार्ड र सम्मान लिन अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका पदाधिकारीको भ्रमण मितव्ययी बनाउन खोजेको समाचार छ । अवार्ड र सम्मान लिन जाने नाममा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारीबाट हुने गरेका अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैङ्कले गर्न लागेको व्यवस्था झट्ट हेर्दा उचित नै देखिन्छ । तर, त्यस्तो विकृतिको नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कले नियमै बनाउँदै जान कति साध्य होला ? सम्बन्धित संस्थाका शेयर होल्डर नै त्यस्ता विकृतिका विरुद्ध उत्रिए भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवार्ड दिने विदेशी संस्थाको वैधानिकता खुल्ने आधिकारिक कागजात पेश गरेपछि त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर राष्ट्र बैङ्कले अवार्ड लिन पाउने वा नपाउने विषयको निर्णय गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा अवार्ड र सम्मान लिन जाने नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा आउन सक्छ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवार्ड लिन विदेश जान नपाए पनि त्यस्ता विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिलाई गेष्टका रूपमा यहीँ बोलाएर अवार्ड लिन सक्छन् । त्यसो गरे भने के गर्ने ? यस विषयमा भने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सीईओलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट अवार्ड लिन जाने क्रममा बदमासी हुन थालेकाले कुनै नियम ल्याउनुपर्ने नै थियो । नामै नचलेका संस्थाबाट अवार्ड लिन जाने र इज्जत नै नभएका अवार्ड लिन पनि संस्थाको ठूलै रकम खर्च हुने गरेकाले यस्तो नियम ल्याइएको देखिन्छ । तर, संस्थाका पदाधिकारीबाट हुने सबै किसिमका विकृति रोक्न राष्ट्र बैङ्कले नियम बनाएर साध्य हुँदैन ।
वास्तवमा विदेशी संस्थाले दिने अवार्ड लिन जाने पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत नहुने गरी पैसा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, पदको दुरुपयोग गर्दै परिवारका सदस्यलाई समेत भ्रमणमा लगेर संस्थाको ठूलो रकम खर्च हुने परम्परा नै बसिसकेको छ । त्यो परम्परालाई राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो परिपत्रले थोरै भए पनि नियन्त्रण गर्ने आशाचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा विदेश भ्रमणको खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नै कार्यविधि तयार पार्न भनिएको छ । वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले भनेजस्तै कार्यविधि बनाउलान् पनि । तर, त्यो कार्यविधि कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ त ? सबैभन्दा बढी वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने क्षेत्र भनेको बैङ्किङ क्षेत्र हो । त्यस्तो अनुशासन कायम गर्ने काम संस्था आफैले गर्नुपर्ने हो । अवार्ड लिन स्वीकृति लिनुपर्ने तथा भ्रमणको खर्चलाई व्यवस्थित पार्न कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बैङ्कहरूको सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले पनि कत्तिको चासो देखाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यस्ता अप्ठ्यारा र विकृति अरू पनि छन् । राष्ट्र बैङ्कले कतिलाई नियन्त्रण गर्ने ? अध्यक्ष, सीईओलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले अनुशासन पालना गरेनन् भनेर बैङ्किङ क्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठामा नै आँच आउने काम भइरहेको खुलासा हुनु कति लाजमर्दो छ । ती पदाधिकारीले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयर होल्डरहरू थोरै भए भने साधारण शेयरधनीले साधारणसभामा भनेको कुरा सुनिन्थ्यो होला । तर, बैङ्कको ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापक समूहकै हुनुपर्ने व्यवस्था भएपछि साधारण शेयरधनीले ल्याएको प्रस्ताव त्यसै पेलिन्छ । शुरूमा न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने नियम थियो । तर, त्यो ‘न्यूनतम’ भन्ने प्रावधानलाई लत्याएर ‘३० प्रतिशत मात्र’ भन्ने व्यवस्था गरियो । धेरै हल्लाखल्लापछि राष्ट्र बैङ्कले संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार सञ्चालक समिति बनाउने व्यवस्था बनायो । त्यो भएपछि साधारणसभामा पनि सञ्चालककै हैसियत बढी हुने भयो । अनि उनीहरूले जे प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यो पारित हुने नै भयो । संस्थापकको थोरै प्रतिशत मात्र शेयर हुने व्यवस्था भएको भए अवार्ड लिन जाँदा हुने खर्च साधारणसभाबाट पारित गर्न निकै समस्या पथ्र्यो । त्यो भएको भए राष्ट्र बैङ्कले यस्ता निर्देशन जारी गर्नु पर्दैनथ्यो ।